Fa maninona ny ankamaroan'ny fitaovana elektronika no mampiasa jaketa 3.5mm? -News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Fa maninona ny ankamaroan'ny fitaovana elektronika no mampiasa jaketa 3.5mm?
Fotoana: 2020-07-16 Hits: 17
Ahoana no nanapahan'ny orinasa maro tamin'io seranana io ihany ho an'ny audio amin'ny fitaovany? Nanapakevitra tampoka ve ireo firenena sy orinasa ireo hifanaraka amin'ity olana iray ity? Inona no tsiambaratelo ao ambadiky ny fanekena malalaka ny jack 3.5mm?
Fiandohan'ny jack audio 3.5 mm
Ny niandohan'ny jack 3.5mm dia azo jerena hatrany amin'ny 19th century. Back in 1878, a predecessor to the 3.5mm jack, a 6.35mm jack (also called the ¼” inch jack) was developed as a ‘phone connector’ used by telephone operators to direct calls manually. Back then, you couldn’t just dial a number and be connected straight away. You had to speak to an actual person (the operator) and request that they connect your call forward.
Ny lazan'ilay jack 3.5 mm
Ny fiandohan'ny 20th taonjato nahita ny fahatongavana sy ny fampielezana ny fampielezana radio. Radio no ohatra voalohany nahitan'ny jack ampahefatra ampiasain'ny mozika. Nifindra tany amin'ny fivarotana elektronika akaiky indrindra ny isan-tokantrano mba hitondra ny milina mozikan'izy ireo manokana. Ny olona avy amin'ny lafim-piainana rehetra, manomboka amin'ny trano falifaly any New York ka hatramin'ny trano goavambe misy tokotanin-dry zareo manokana, dia nisy mozika naneno tamin'ny radio, ary ny sasany aza efa nifampiresaka taminy mihitsy!
Ny fangatahana radio ho an'ny daholobe dia mamela ny jack quart-inch ho lasa fitsipika vaovao eo amin'ny sehatry ny famerenana feo. Na izany aza, dia tsy tamin'ny faramparan'ny 20th taonjato izay nakan'ny besinimaro ilay jack maoderina 3.5mm ho an'ny traikefany mihaino mozika.
Tamin'ny 1979, Sony dia namorona ny Walkman, izay nanova ny indostrian'ny mozika azo entina. Io ilay iPod alohan'ny nisian'ny iPod. Miaraka amin'ny tanjona hahamora kokoa azy, Sony dia nampiasa ilay jack 3.5mm kely kokoa, izay nampiasaina voalohany tamin'ny transistor radio an'ny orinasa Japoney. Ny olona rehetra nanomboka tamin'ny mpianatry ny oniversite ka hatramin'ny mpisotro ronono dia niditra tao an-tsofiny i Sony Walkman. Io fitakiana fipoahana ho an'ny Walkman io no namela ny lazan'ny jack 3.5mm malaza. Ankoatr'izay, ny teknolojia nampiasaina tao amin'ny seranan-tsambo 3.5mm tamin'ny 1979 dia mijanona tsy miova mandraka androany.
Ahoana ny fiasan'ny audio jack 3.5 mm?
Ilay jack 3.5mm izay ampiasaintsika be dia be ankehitriny dia antsoina hoe mpampifandray TRS (Tip Ring Sleeve). Ny tendrony, ny peratra ary ny tanany dia ampahany telo tsy mitongilana amin'ny jack. Ireto misy marika eto ambany:
Ny tendrony dia mamindra onjam-peo mankany amin'ny mpandahateny havia / earpiece, ny peratra dia mamindra amin'ny mpandahateny / sofina havanana ary ny tanany no misy ny seranana. Ny tarika mainty eo anelanelany dia antsoina hoe grommets mitokana, izay miantoka fa tsy misy ny fampifangaroana feo tsy ilaina eo amin'ny fantsona havanana sy havia. Raha mandinika ianao, ny jacks 3.5mm sasany dia manana grommet mitoka-monina iray, ny sasany kosa manana roa, ary ny sasany kosa miaraka amin'ny telo. Ny grommet mitoka-monina iray dia midika fa ny mpampitohy dia tonga amin'ny tendrony sy tanany tsy misy peratra, izay mitarika famoahana feo mono. Raha manana sofina miaraka amina peratra tokana ianao dia hanana feo avy amina iray amin'ireo sofina ihany. Jack-grommet iray no ampiasaina voalohany indrindra amin'ny gitara.
Taloha: Ny firafitry ny fametahana konductive
Next: Ahoana no fiasan'ny telefaona voaroy?